Gimenokallis: atụmatụ nke ịkụ ihe, nlekọta, mmepụta nke osisi bulbous herbaceous - Mkpụrụ ubi - 2020
Na-eto eto hymenocallis na ubi na n'ụlọ
Osisi nwere ihe omuma aha nke Hymenocallis na-etowanye. A na-etolite ya n'ụlọ na n'ógbè ndị dịpụrụ adịpụ. Ndị na-eto eto nwere ahụmahụ na-atụ egwu ụdị osisi ndị ahụ, na-ekwenye na ilekọta ha chọrọ ihe ọmụma pụrụ iche na oge na-ewe. Anyị ga-egosipụtakwa nke ọzọ, na-eji ihe atụ nke osisi na-enweghị atụ, nke a na-enweghị atụ.
Ụdị ndị dị mma
Otu esi eto osisi
Site na nkpuru
Igwe mmiri na okpomọkụ
Atụmatụ na-elekọta ubi
Ọrịa na pests nke hymenocallis
Gimenokallis bụ ahịhịa mara mma nke mara mma nke Amarilis. A na-ewere ala nna ya dị ka Central na South America, India na Africa. N'ime ọhịa, a na-ahụkarị ya na ndagwurugwu na ọdọ mmiri. Ọdịbendị na-eto eto n'èzí na n'ụlọ. Ntube nke osisi ahụ buru ibu ma yiri ọdịdị nke ube; N'ịbụ onye na-eto eto, tuber ruru 10 cm n'ịdị elu. Akwụkwọ ndị ahụ dị warara, ụdị ụdị xiphoid na-abanye n'ime nnukwu onye ofufe na isi nke bọlbụ ahụ. Na ogologo nwere ike iru 80-100 cm Agba nke epupụta nwere ike na-egbuke egbuke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ntụ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
E nwere ma osisi na-egbuke egbuke na ndị na-agba akwụkwọ ha. Otu ihe di iche iche nke osisi a bu ihe di iche iche, ihe ndi ozo di iche iche, nke bu okpueze nke ugha nke anu aru. Gburugburu isi nche nke mkpuru osisi ahụ dị 6 warara, ogologo oge, ogologo ha n'ogologo dị 25 cm. Mgbe okooko osisi gasịrị, mkpụrụ osisi oval na-apụta, kpuchie ya na nro dị nro.
Ị nwekwara ike inwe mmasị na osisi ndị dị otú ahụ na okooko osisi: Drimiopsis, Alokaziya, Strelitzia.
N'okpuru osisi, e nwere ihe karịrị anụ 55, anyị na-ewere ndị kachasị ewu ewu na ha.
Gimenokallis n'ụsọ oké osimiri - osisi mara mma, nke a na-akpọkwa lily spider, n'agbanyeghị na ọmarịcha ihe mara mma, ilekọta ya agaghị esi ike. O rute elu nke 35-40 cm, okooko ududo, nwere mmetụ dị mma. Mkpụrụ nke 2-3 buds na-etolite na okooko oko. Akwukwo akwa a na - eto 90 cm n'ogologo na 6 cm n'obosara. Osimiri na - adị ogologo oge - site na mmalite nke February ruo na njedebe nke May.
Gimenokallis bụ lily Caribbean ma ọ bụ Caribbean na-achọ ịmalite ma na-enweta nlekọta kwesịrị ekwesị n'ụlọ. Enweghị ike, okooko osisi dị ịtụnanya enweghị ike iji tụnyere ụlọ ọ bụla ọzọ. White okochnid okooko osisi na-acha anụnụ anụnụ anthers nwere ike ịghọ ezigbo mma maka window gị. Ụdị a na-ahọrọ windo ndị dị na mbara igwe na iji nlekọta kwesịrị ekwesị, nwere ike ịmalite oge ugboro atọ na-eto eto. Mkpụrụ mbụ ahụ na-esi ísì ụtọ na-apụta na njedebe oge okpomọkụ. Na-achọ ka evergreen perennials.
Himenokallis dị mma ma ọ bụ maa mma - n'ọhịa, a na-ahụ ya n'ọhịa oké osimiri. A na-etolite buds 6-12, nke ji nwayọọ nwayọọ gbasaa. Ụdị okooko osisi ndị yiri okooko osisi, ísì ụtọ ha dịkwa ka ísì ísì.
Gimenokallis broadleaf - orbamental herb that reaches a height of 60-70 cm Na epupụta bụ xiphoid, na efere efere nwere ebumpụta ụwa bụ isi nke ụdị a. Okpokoro nche buds chọọ ogologo gbagọrọ agbagọ petals nke 10-15 cm.
Ị ma? Ugboro ugboro, a na-ekwu na ndị nwoke bụ ndị hymenocallis, nke a na-akọ na nlekọta ya dị nnọọ iche, nanị ọdịiche dị n'agbata ụdị ahụ bụ ụgha ụgha na ndị nnọchianya nke ismena, ha dịkwa ihe karịrị 10.
Emeputara hymenocallis nwere ike ịnweta ụzọ abụọ, site na ịgha mkpụrụ ma na-ekewapụta ndị bulbs.
Mkpụrụ nke hymenocallis na-eto eto siri ike na ogologo, nke mere na ha na-etolite, ha kwesịrị inye nlekọta kwesịrị ekwesị. Ihe na-akụ ihe na-eto ngwa ngwa, usoro ahụ nwere ike iji izu 2 ruo ọtụtụ ọnwa. E kwesịrị inyefe ala na akwa na ájá na peat. A ghaghị ịme mmiri mgbe nile, igbochi ala site na ihichapụ, nakwa iji kpuchie anyanwụ na-ere ọkụ iji zere ọkụ na-eto eto.
Ọ ga-enyekwara gị aka ịchọpụta ụdị okooko osisi ndị na-anaghị ekwe ka ha na-etolite n'ụlọ.
A na-ewere mmepụta bulb dị ka ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe. Mgbe osisi ahụ ruru afọ 4-5, ụmụaka na-etolite na tuber iji kewaa ha, a kpochapụrụ osisi ahụ nke ọma, jiri nlezianya wepụ obere yabasị ma kụọ ya ozugbo. Ala nke na-eto eto ifuru na-eme ka o doo anya;
Ọ dị mkpa! Ihe bụ isi bụ iji gbochie bulbs si ihichapụ n'oge transplantation, ya mere, a na-atụ aro ka a kụọ ha ozugbo ha kewara.
Gimenokallis bụ nke osisi na-enweghị atụ, ya mere ilekọta ya n'ụlọ ga-esi ike. N'ịgbaso iwu ndị dị mfe, ị nwere ike ịhụ osisi pụrụ iche, mara mma n'ụlọ gị.
Ebe kachasị mma iji na-eto hymenocallis n'ime ite ga-abụ windo na-acha anwụrụ ọkụ n'ebe ndịda. Osisi ahụ na-atọ ụtọ nke ìhè, ma n'otu oge ahụ jiri nwayọọ na-ezo aka na nkedo dị ntakịrị, ya mere, ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume inye fatịlaịza maka sill window, n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ ga-emekwa.
N'okike, a na-ahụ osisi ahụ n'akụkụ ọdọ mmiri, iru mmiri na-arụ ọrụ dị mkpa maka nkasi obi ya. Ọ bụrụ na ikuku nke dị n'ime ụlọ ahụ dị oke ọkụ, ị kwesịrị ilezi anya na ị na-ehicha ya ma tinye mmiri dị n'akụkụ obere ite. N'ime oge na-eto eto, ọ gaghị abụ oke ụba iji fesaa epupụta kwa ụbọchị na mmiri dị iche iche, mana iji zere ya na ndị buds. N'oge ọkọchị, ezigbo okpomọkụ nkasi obi maka ifuru osisi dị elu bụ 22-24 Celsius.
Ọ dị mkpa! Ná ngwụsị nke oge na-eto eto, n'oge oge ezumike ahụ, ị ​​ga-ebugharị mmiri ahụ na ebe dị jụụ na okpomọkụ nke 10-13 Celsius C ma kwụsị ịgbara. Ifuru ga "zuru ike" maka ọnwa 3.
Bulbous perennial chọrọ ala mmiri mgbe nile, ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche oge ahụ ma ala dries, ọ nwere ike ịghọ nwa mmiri. Naanị ka ị ghara ịkwagharị mmiri mgbe niile na oke mmiri, oke mmiri dị njọ na bulbous, n'ihi na ọ na-akpata rotting nke tuber.
N'ime oge na-eto eto, a na-eri okooko osisi na nri nri ịnweta nri otu ugboro n'izu, nke a dị mkpa maka okooko ahụ ka ọ dị ogologo. Echefula banyere hymenocallis na oge izu ike, ọ bụ ezie na a na-eri nri n'oge a karịa otu ugboro n'ọnwa.
A na-egbute eyịm eyịm ọ bụla n'afọ 3-4. Ọ kachasị mma ime ya n'oge oge ezumike ahụ, mgbe ahụ, usoro ahụ ga-adị njọ. Iji nye nnukwu okooko osisi, obere pots kwesịrị ịhọrọ. Nke bụ eziokwu bụ na na perennial ahịhịa na-emepụta ọtụtụ buds.
Ọ dị mkpa! A naghị anabatacha nri ndị na-edozi ahụ.
Gimenokallis zuru okè ka ọ na-eto n'ubi ahụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na tupu ị kụọ osisi ahụ, ọ dị mkpa ka ọ ghara ịmalite, ọ ga-abụkwa mgbe nke ahụ gasịrị na-akwaga ha n'ala. Iji mee nke a, jiri igbe pụrụ iche maka seedlings, seramiiki nkịtị ma ọ bụ ite plastik, ihe kachasị mkpa bụ na n'otu akpa ahụ, enwere oghere maka mmiri nke mmiri mmiri. Mgbe ahụ, akpa ahụ jupụtara na sawdust na peat na yabasị na-etinye ya na omimi nke 5-7 cm mgbe ahụ, a na-ahapụ ya ka ọ gbanye ruo izu 2-3 na okpomọkụ anaghị elu karịa 15 Celsius. Na njedebe nke May, mgbe ụwa dị ọkụ, ị nwere ike ịghaghachi yabasị na mbara ala. Nlekọta ọzọ anaghị adị iche na ụlọ. A ghaghị ijide ihe ntinye na atọ na ịnweta. Na njedebe nke oge na-eto eto, a na-egwu olulu ma na-echekwa n'ọchịchịrị, dị jụụ ruo oge ọzọ.
Na nlekọta kwesịrị ekwesị, a naghị ahụ osisi ahụ na ọrịa na ọrịa. N'ihi oke mmiri, aphid ma ọ bụ ududo mpi nwere ike ịpụta. Na-alụso ha ọgwụgwọ ahụhụ. Maka otu ihe ahụ, rotting nke bọlbụ ahụ nwere ike ịmalite, n'ọnọdụ nke ahụ, a ga-ewepụ ya ngwa ngwa, bepụ ebe ndị ahụ metụtara, fesa ya na ntụ, ma ọ bụ mesoo ya na Fundazol. Ọdịdị dị na akwụkwọ nke obere specks brown na ntụpọ ojii nwere ike igosi na osisi ahụ na-arịa ọrịa na anthracnose. Mgbe ị kwadoro nchọpụta ahụ, wepụ akụkụ ndị ahụ mebiri emebi nke osisi ma gbaa ha ọkụ. A na-atụ aro ka a gwọọ gị akwụkwọ na-enye gị ọgwụ. Ọrịa ọzọ nke nwere ike imetụta hymenocallis bụ staganospores, ihe mgbaàmà ya na-acha uhie uhie na oji ojii na agba. N'ọnọdụ nke ọdịdị ha, a na-efesa ifuru na ihe ngwọta nke ntọala. Iji kwadebe ọ na-ewe 3-4 g nke ọgwụ na 2-3 lita mmiri.
Ị ma? Ihe ọṅụṅụ nke osisi a bụ nsi, ma n'agbanyeghị nke a, a na-eji ya na nkà mmụta ọgwụ. O nwere ihe ndị na-enyere aka ịlụ ọgụ na ederede. A na-ewepụta akwụkwọ nke hymenocallis iji kpalite ntutu isi.
A gaghị eleghara ifuru a nke a anya ma bụrụ nke na-egbukepụ egbukepụ, na-adọrọ mmasị na akwa akwa gị. Iji mee ka ọ dị mma mgbe ọ dị mma ma chọọ ya mma, ọ ga-ezuru ịgbaso iwu dị mfe maka nlekọta ma jiri amamihe na-abịakwute ọdịda. Ọ bụrụ na ihe niile achọrọ nke ifuru na-ezute ya, ọ ga-atọ gị ụtọ na ísì ụtọ ya na ịma mma siri ike.